﻿ ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ख्याल राख्नुहोस्
ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ख्याल राख्नुहोस्
काठमाडौं । अध्ययन र कामका लागि ल्यापटप अति आवश्यक डिभाइसको रुपमा उपयोग हुन थालेको छ । नयाँ ल्यापटप लिँदा धेरैलाई कुन र कस्तो लिने भन्ने कुरा तय गर्न निकै दुविधा उत्पन्न हुने गरेको छ ।
यदि तपाईंलाई अफिसको काम, अनलाइन क्लासका लागि ल्यापटप खरिद गर्नुपर्ने छ भने ३५ देखि ५० हजार रुपैयाँको रेञ्जमा राम्रै ल्यापटप पाउन सकिन्छ । तर सस्तोभन्दा दुईरचार हजार खर्च गरेर राम्रो ल्यापटप खरिद गर्ने कुरामा कञ्जस्याई भने सकेसम्म नगरेकै राम्रो ।
फेसबुकले ल्यायो भाषा अनुवाद गर्न सक्ने सफ्टवेयर
नेपालका सञ्चालित उत्कृष्ट ५ डिजिटल वालेट